काठमाडौंमा आज २४ जनामा कोरोना संक्रमण - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : काठमाडौंमा सोमबार थप २४ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पोजिटिभ देखिएको छ ।
पाटन अस्पताल ललितपुर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा आज काठमाडौंका २४ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ ।
त्यस्तै, आज नै उपत्यकाको ललितपुरका २० र भक्तपुरका १० जनामा कोरोना पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
आज मात्रै उपत्यकाका ३ जिल्लामा ५४ जनामा कोरोना देखिएको डा. गौतमले बताए । योसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या २ सय ३८ पुगेको छ ।
आज १८० जनामा कोरोना पुष्टि
नेपालमा सोमबार १ सय ८० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । देशका विभिन्न २५ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आज थप १ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
योसँगै सङ्क्रमितको कुल संख्या १५ हजार ९ सय ६४ पुगेको छ । त्यस्तै आज २ सय ६४ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् ।